Homopiperazine poda (505-66-8) hplc≥98% | AASraw R&D Reagents
/ Products / MaR & D Reagents / Homopiperazine upfu
Rating: SKU: 505-66-8. Category: MaR & D Reagents
MUTSVENE unobatsira nekugadzira zvigadzirwa kubva kugiramu kusvika pakukura kweHomopiperazine powder (505-66-8), pasi peCGMP mutemo uye trackable quality control system.
Homopiperazine powder inoshandiswa kugadzirira 1,4-bis- (2-thiazolyl) -1,4-diazacycloheptane nekuita ne 2-bromo-thiazole. Inoshanda sepakati pemiti ye repaglinide uye fasudil hydrochloride. Inoshandiswawo mukugadzirira kwevanonyanya kupikisa H3 avo vanopikisa, iyo inoshandiswa mukurapa mamiriro ezvinhu eurodegenerative. Uyezve, inoshandiswa mune vesicant, zvipfeko, emulsifier uye simba rine simba. Inoshanda segorosi inhibitor yesimbi. Mumishonga, inoshandiswa se antipyretic uye kuderedza shuga yeropa, chidimbu, kugadzikana, antipsychotic uye anti-nervous.
Homopiperazine powder video
Homopiperazine powder Basic Characters
Molecular Kurema: 102.177
Storage Temp: Refrigerator, Under Inert Atmosphere
Color: Muchena kuchena kristalline powder
Homopiperazine powder senzira dzokurapa kwemaurodegenerative conditions
Homopiperazine powder Usage
Muyero wemushonga uyu uchave wakasiyana kune akasiyana varwere. Tevera mirairo yechiremba wako kana madhairekisheni akanyorwa. Iyi inotevera ruzivo inosanganisira chete avhareji madhizaini emushonga uyu. Kana dosi rako rakasiyana, usachinje kunze kwekunge chiremba wako akuudza kuti uite saizvozvo.
Kuwanda kwemishonga yaunotora inobva pane simba remishonga. Uyewo, nhamba yemadhora iwe unotora zuva rega rega, nguva yakabvumirana pakati pematare, uye nguva yaunotora mishonga inobva pane dambudziko rerapa rauri kushandisa mushonga.
(1) Kuti uwane granules for form oral solution dosage:
• Vanhu vakuru uye vechidiki-2 gramu katatu pazuva kwezuva rimwe. Mishonga inogona kudiwa kudzokororwa mumavhiki maviri.
• Vana-Mharapa inobva pazera uye / kana muviri. Mishonga inogona kudiwa kudzokororwa mumavhiki maviri.
• Kusvikira kumakore e2: Dose inofanira kusarudzwa nachiremba wako.
• 2 kusvika kumakore eA8: 2 gramu kamwechete pazuva kwezuva rimwe.
• 8 kusvika kuA14 yemakore: 2 gramu kaviri pazuva nokuda kwezuva rimwe chete.
(2) For form suspension dosage fomu:
• Vakwegura uye vechidiki-1.8 gramu maawa mana ega ega yezvikamu zvitatu zvezuva rimwechete. Mishonga inogona kudiwa kudzokororwa mumavhiki maviri.
• Vana-Mharapa inobva pazera. Mishonga inogona kudiwa kudzokororwa mumavhiki maviri.
• Kusvikira kumakore e-2: 600 milligrams (mg) maawa mana oga oga kwehutatu hwemazuva matatu.
• 2 kusvika kumakore gumi nemana 8: 1.2 magiramu maawa matanhatu matanhatu kwemazana maviri emazuva maviri.
• 8 kusvika kumakore e14 yemakore: 1.2 gramu maawa mana oga oga kwehutatu hwemazuva matatu.
(3) For fomu yepaji yepamusoro:
Pamusana pevhirikiti dzakawanda:
• Vanhu vakuru nevechiri kuyaruka-3.5 gramu (piperazine hexahydrate) pazuva kwemazuva maviri mushure. Mishonga inogona kudiwa kudzokororwa muvhiki imwe chete.
• Vana-Mharapa inobva pauremu hwemuviri uye inofanira kutsanangurwa nachiremba wenyu. Zvisinei, chirwere chinowanzoitwa 75 mg (piperazine hexahydrate) kilogram (34 mg paundi) yehutatu hwezuva nezuva kwemazuva maviri mushure. Mishonga inogona kudiwa kudzokororwa muvhiki imwe chete.
• Vanhu vakuru uye vana-Dose inobva mumuviri wehutano uye inofanira kusarudzwa nachiremba wenyu. Zvisinei, chirwere chinowanzoitwa 65 mg (piperazine hexahydrate) kilogram (29.5 mg pound) yehutatu hwezuva nezuva kwemazuva manomwe mumutsara. Mishonga inogona kudiwa kudzokororwa muvhiki imwe chete.
Warning on Homopiperazine powder
Usafudza mwana kana chirwere pasi pemavhiki matanhatu ezera. Usambova nehonye chirwere chidiki, imbwa, kati, kana chikafu. Tsvaga muchengeti wezvokurapa muhutano, kurapwa uye kutarirwa kwepasisitini. Hazvikurudzirwi kune imbwa pasi pe5lbs. kana makate pasi pe2lbs. wehutatu hwemuviri. Hazvikurudzirwi nekuda kwevakadzi vane pamuviri kana vacheche. Zvipfuwo zvemakore anopfuura 1 zvinofanira kuva nehuwandu husina kunaka hwehutachiona hwehutachiona hwemvura vasati vashandurwa.
Homopiperazine powder inogona kushandiswa se-organic uye mishonga inonzi synthesis intermediates, somuenzaniso, kushandiswa ku synthesis of fasudil hydrochloride.
Homopiperazine powder inoshanda seyorrosi inhibitor yesimbi. Iyo yakashandiswawo mukugadzirira kwevanonyanya kupikisa H3 avo vanopikisa kuti vashandise semishonga yemamiriro eurodegenerative akafanana neAlzheimer's disease.
Homopiperazine Raw Powder
Homopiperazine powder Marketing
Nzira yekutenga Homopiperazine powder kubva kuAASraw